Lahatsary - Geofumadas
Horonan-tsary hianarana ny fomba fampiasana ny AutoCAD, ArcGIS ary programa hafa fandaharam-potoana.
Sary sy horonan-tsary mahavariana tamin'ny horohorontany sy tsunami tany Japon
Izay ihany, mahatalanjona. Raha tany amin'ny faritra andrefan'i Eropa izahay dia nifoha ary tany Amerika dia nahita tory tsara indrindra izahay, horohoron-tany nahatratra 9 teo amin'ny maridrefy Richter no nampihozongozona an'i Japon rehefa tamin'ny 3 tolakandro teo. Tsy manam-paharoa ny fijerena ireo horonantsary momba ny fidiran'ny rano sy ny fitondrana trano, fiara sy sambo. Nisy izany…
Sokafy ny Tools CAD, fitaovana fanovana gvSIG
Nisy andiana fiasa mahaliana izay natomboka, izay avy amin'ny fandraisana anjaran'i CartoLab sy ny Oniversiten'i La Coruña. Ny gvSIG EIEL dia misy fanitarana isan-karazany, tena ilaina tokoa, na ho an'ny fitantanana mpampiasa avy amin'ny interface gvSIG, endrika manokana ary fanamarinana mandeha ho azy. Fa ny tena nahasarika ny saiko dia ny Open ...
AutoCAD-Autodesk, GvSIG, fanavaozana, Video
Navoaka ny kinova 1.2 an'ny AutoCAD 2011 WS, izay fampiharana AutoDesk maimaimpoana maimaimpoana mamela anao hiasa amin'ny Internet sy amin'ny finday. Fanatsarana lehibe io, na dia tara ao ambadiky ny zava-drehetra ataon'ny kinova an-tserasera aza ny kinova finday. Ireto fanatsarana ireto dia misy: Fanohanana ho an'ny ...
Apple - Mac, AutoCAD-Autodesk, fanavaozana, Video
XYZtoCAD, miasa amin'ny AutoCAD ny asa
AutoCAD irery tsy mitondra fampiasa maro amin'ny fitantanana koordinatera na famoronana latabatra avy amin'ny teboka. Ny 3D XNUMXD no manao izany, fa tsy ny dikanteny ifotony, ary izany no antony hizahantsika miasa miaraka amin'ireo fandrindrana ateraky ny gara iray manontolo, GPS na tsatokazo, raha tokony hiasa amin'ireo makro miparitaka ao isika. ...
Ny fianarana AutoCAD dia tsy fialan-tsiny intsony amin'izao fotoana ifandraisana izao. Azo atao izao ny mahita boky fampianarana an-tserasera maimaim-poana. Ity safidy asehoko anao ity angamba no safidy safidy tsara indrindra hianaranao mora foana ny AutoCAD. Sanganasan'i Luis Manuel González Nava, kinova nisy tamin'ny ...
Teo ianao ...
Nanao pirouette ilay zazavavy, nitodika tany aminy, nanatona, niankohoka, ary nahita azy 34 santimetatra. Avy eo fantany fa izy, ilay maso ihany… Alina mahazatra, asa an-terivozona ao amin'ny birao. Tamin'izany andro izany dia naneno teo amin'ny fitendry Chamaco ny mozikan'i U2, izay nitondra ...
Fialam-boly / fitaomam-panahy, Video
Rehefa afaka herintaona sy sasany niasa tamin'ny Acer Aspire One, nanao CAD / GIS tamin'ny ambaratonga fiofanana, nandefa, famolavolana sary sy fizahana, eto no mamintina ny tena zava-dehibe indrindra. Tamin'ny antsipiriany dia efa niresaka olana efatra aho, saingy izao dia mamintina efatra hafa aho ary manadihady raha misy dikany na tsia ny fanohizana ...
Acer hiandrandra Autodesk
Internet sy Blogs, Video
Faminaniana 2010: Internet
Mazava ho azy fa te hanana baolina majika aho ary afaka manao azy ho santero, saingy tsy izany no lazaiko, manandrana mandany fotoana kely fotsiny ao amin'ity fihinanam-bilona ity aho izay fitsaboana sy ity kaopy kafe ity satria ny rafozambaviko ihany no manao, mikiakiaka ary miraikitra, rehefa afaka izany. lasopy hazan-dranomasina. Manazava, ho an'ireo izay vao namaky ...
Internet sy Blogs, My egeomates, Video
Izaho, Cadastre ary Google Earth
Vao avy niverina avy nitety ny tany aho, teo anelanelan'ny sakafo Creole, ny faneren'ny fihodinana mendrika amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany sy ny fahafaham-po amin'ny asa, ity misy santionany andian-teny tsy hay hadinoina amin'ny varotra. Ireo mpanolo-tsaina: -Hoingana! -dialog fanadiovana! Ireo mpanao sariitatra: -Ufff !!! Rahoviana izy ireo no mandoa? Ireo mpanombana: -Tsy mampahatsiahy ahy akory izy ireo… Ny lehibeny: efijery printy! Ireo an'ny ...
Acer hiandrandra Google Earth
Fomba hametrahana lahatsary ao amin'ny Google Earth
Mahazo fanontaniana aho, izay misy olona te-mampakatra horonantsary ao amin'ny Google Earth, azoko tsara fa mitady hanondro làlana sy manampy video ho azy ireo izy. Andao jerena zavatra azo atao ary azon'ny namantsika Meksikana atao ny mangataka, mitovy amin'ny famoahana sary izany. Atsofohy amin'ny horonan-tsary YouTube hoe manantena aho ...
AutoCAD 2010, Wow! Ity no anarana nomen'i Heidi ny fanitsiany an'ity kinovan'ny AutoCAD ity, herintaona monja taorian'ny nitantarany taminay momba ny AutoCAD 2009. Avy amin'ny nenitoako iray izay nahita izay vaovao isan-taona nandritra ny 17 taona, mety mendrika ny hijerena azy. Maromaro amin'izy ireo no noheverinay ...
AutoCAD-Autodesk, fanavaozana, Video
Misy bilaogy ao amin'ny Spaces ve misy mihoatra ny 500 ny fidirany?
Windows Live Writter dia iray amin'ireo famoronana farany tsara indrindra nataon'i Microsoft. Ny kinova vaovao 14.0 izao dia vonona ny hisintona, misy fanatsarana lehibe toy ny: Ny lahasa fikarohana, rehefa manokatra votoaty taloha Preview kiheba eo ambany Mamorona sary collage Ampidiro horonan-tsary avy ...
Ahoana ny fampiasana sary nalaina avy amin'ny Google Earth
Araka ny nolazaiko anao tamin'ny herinandro lasa teo, anio dia havoaka ny kinova Google Earth 5.0 vaovao, ary na dia mifoka ny sasany aza izahay, dia talanjona tamin'ny fiasa aho nahita ny arisivan-tsary nisy ireo sary nampidinin'i Google tamin'ny 2002 ka hatramin'ny ny daty. A ...
Google Earth / Maps, fanavaozana, Video
Ny sarintany solika
Any amin'ny Flickr no misy azy. Raha ny fanazavana, tsy maintsy manavao ny zavatra nianarantsika momba ny jeografia tamin'ny kilasy fahenina momba an'i Eropa Atsinanana isika, saingy mahaliana; dia sarintany hita amin'ny fomba fijerin'ny tombontsoany manodidina ny solika (farafaharatsiny misy fanamafisana betsaka) ... eo ambanin'ny fiheveran'ny mpamorona sary. ...
Cartografia, Fialam-boly / fitaomam-panahy, Video